नेताका छोराछोरीमाथि सुरक्षा थ्रेट, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्नेलाई होला त कारबाही ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ०९, २०७५ समय: १२:३२:२३
सुनसरी । राजधानीमा शनिबार शक्ति प्रदर्शन गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेताले धम्कीको भाषामा दिएको भाषणको अहिले सर्बत्र चर्चा भएको छ । पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ले भाषण गरेपछि अहिले सरकारमा रहेका पार्टीका नेताका छोराछोरीमाथी समेत सुरक्षा थ्रेट बढेको छ । बिभिन्न ध्वांशात्मक क्रियाकलाप गर्दै आएको सो पार्टीका जिम्मेवार नेताको भाषणले नेपाली राजनीतिमा नयाँ भुकम्प नै पैदा गरेको छ ।
प्रकाण्डले के भने भाषणमा ?
करिब ४ महिनाअघि कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा सरकार सञ्चालन गरेर बसेका व्यक्तिकै छोराको संलग्नता रहेको उनले ठोकुवा गरे । सार्वजनिक आमसभास्थलबाटै प्रवक्ता प्रकाण्डले हत्यारा सरकार सञ्चालककै छोराछोरी भएको मात्र दाबी गरेनन, उनले अब आफ्नै पार्टीले हत्याको अनुसन्धान गरेर बलात्कारी र हत्यारालाई कारवाही समेत गर्ने बताउँदा सभाको माहोल नै अर्कै बन्यो । यति लामो अनुसन्धानमा समेत पत्ता नलागेको सो बिषयको छानबिन आफै गर्ने र दोषीलाई सार्बजनिक स्थानमा ल्याएर कारबाही गर्ने बताएपछि नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।
उनले भने ‘यो सरकार न अपराधीलाई पत्ता लगाउन सक्छ, न त यसलाई कारवाही गर्न सक्छ । यसले के प्रष्ट गर्छ भन्दा सरकार नै निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारका घटनामा संलग्न छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।’ अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थल आसपासका सीसी क्यामेराका फुटेजहरु डिलिट गरिएको भनिएकोमा त्यसको रिकभर गर्न काठमाडौं ल्याइएकोमा अहिलेसम्म त्यसलाई गुपचुप राखिएको छ ।
नेताहरुमाथि उनको आरोप
प्रकाण्डले ओली सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन रहेको आरोप समेत लगाएका छन । उनले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई ‘पाखण्डी’ को संज्ञा दि एभने प्रचण्डकी बुहारीसमेत रहेकी खानेपानी मन्त्री विना मगरको नाम नलिई उनको मन्त्रालयले मेलम्चीमा अनियमितता गरिरहेको बताए ।
‘सरकारका मन्त्रीहरुको काम भनेको भ्रष्टाचार र कमिसनको लक्ष राखेर प्रोजेक्ट बनाउने छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । दलाल पुँजीपत वर्गाको बिगबिगी छ,’ बिकले भने,’हिजोका भुईँफुट्टा मान्छेहरु अहिले रातारात करोडपति भएका छन् । हिजोका भुइँफुट्टा नेताहरु रातारात अरबपति भएका छन् ।’ बिकले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम लिँदै भने ‘ओलीजी समृद्धिको कुरा गरिराख्नुभएको छ, सायद कि त ओलीजीले देख्नुभएको छैन, कि त बुझ पचाइरहनुभएको छ । नदेख्याजस्तो गर्नुभएको छ । कि त उहाँ केही पनि गर्न सक्नुहुँदैन ।’
नेता प्रकाण्डको यो सार्बजनिक भाषणपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग मात्र उत्पन्न भएको छैन । नेताका छोराछोरीमाथि सुरक्षा थ्रेट समेत उत्तिकै बढेको छ । सरकार प्रति उग्र भाषण गरेका प्रकाण्डको यो भाषणपछि नेपाली राजनिति तरंगित भएको छ ।